warar dheeraad ihi ka soo baxayan diyaaraddii maanta ku dhacday Deegaanka Cumar Beere – STAR FM SOMALIA
Waxay warar dheeraad ihi ka soo baxayan diyaaraddii maanta ku dhacday Deegaanka Cumar Beere, oo qiyaastii 10km dhinaca galbeed kaga beegan Degmada Afgooye Ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Deegaankan, ayaa wuxuu ku yaallaa inta u dhaxeyso Afgooye iyo Toora Toorow, gaar ahaan wuxuu ku dhowyahay dhinaca Toora Toorow, oo Ururka Al Shabaab uu si buuxdo kaga arrimiyo.
Xoogaga Ururka Al Shabaab oo isku gadaamay diyaaradan oo nooceedu uu ahaa Daniel 300f, ayaa waxay diyaaradaasi kala deggeen tiro dad ah. Wararka qaar waxay sheegayan in dadka lagala degay diyaaraddu ay tiradoodu ahayd 9 qof, halka warar kalana ay sheegayan in 12 ruux ay aheyd.
Diyaaradda Daniel 300f waxay ka soo amba baxday Magaalada Nairobi, iyadoona ku sii jeeday Garoonka Balli-doogle, oo saldhig military oo qarsoodi ah uu ku lee yahay Militariga Mareykanka. Soo dhicista diyaaraddu ayaa la sheegay inay ka dhalatay roobab xoogan, oo ka da’aayay inta u dhaxeyso Afgooye iyo Toora Toorow.
Diyaaradan waxaa la xaqiijiyay inay la socdeen Saraakiil Mareykanka u dhashay, waxaa kaloo soo baxaaya in tiro haween ihi ay saarnaayen diyaaradaasi, inkastoo aanay jirin cid weli arrintaasi xaqiijisay. Wararka waxay intaa ku darayaan in laba nin oo Soomaali ihi ay ka mid yihiin dadkii saarnaa diyaaradda.
C/laahi Xasan Cabdi, Gudoomiye Ku Xigeenka Degmada Afgooye, ayaa xaqiijiyay in Shabaabku ay awood u yeesheen inay si buuxdo ula wareegaan gacan ku haynta diyaaradaasi, sababtoo ah buu yiri iyagaa meesha joogga.
Diyaaradaha ay adeegsadaan Saraakiisha Mareykanka ee degan Garoonka Balli-doogle, ayaa waxaa adag in la ogaado kolka ay dalka soo gelayaan iyo marka ay ka amba baxayaanba.
Taliyaha Ciidanka Cirka Somaliya, Maxamuud Sheekh Cali (Dable Baylood) oo Axadii kormeer ku tagey Garoonka Balli-doogle, ayaa sheegay in hay’ado gaar ihi ay dhismayaal ka wadaan Garoonkaasi, xilli sida uu sheegay aanay ka warqabin Dowladda.
Taliyaha, ayaa hay’adahaasi ugu yeeray inay ilaaliyaan sumcadda Ciidanka Cirka Somaliya, oo iyagu degan Balli-doogle, cid kasta oo dhismayaal sharci darro ihi ka wadana ay sharciga la tiigsanayan.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Maxamed Xuseen Shiine, ayaa caawa sheegay in uu jiri doono gurmad loo fidinaayo dadkii, ay gacanta ku dhigeen Xoogaga Al Shabaab, saacadaha soo socda.
Afhayeenka wuxuu Warbaahinta u sheegay in isla maantaba ay u gurmad lahaayen dadkaasi, hase ahaatee ay roobab xoogani ka da’een Deegaanka Cumar Beere, taasoo sida uu sheegay u diiday inay gaaraan Deegaankaasi.
Xukuumadaha Muqdisho iyo Washington, ayaan weli wax war ah ka soo saarin diyaaradda ku dhacday duleedka Degmada Afgooye iyo dadkii saarnaa, oo Shabaabku ay u kaxeysteen dhinaca Toora Toorow